Nhau - Zvakajairika kuchengetedza zvigadzirwa nzira
Chinofambiswa Towel Bar
Bvudzi Dryer Bata
Chinofambiswa tauro bhaa
Kazhinji kugadzirisa zvigadzirwa nzira
Shandisa sipo nyoro senge mvura inogeza sipo uye mvura inodziya pakuchenesa. Sukurudza zvakanaka kubvisa zvose sipo uye zvinyorooma. Pukuta nzvimbo dzakachena uye sukurudza zvachose nemvura nekukurumidza mushure mekuchenesa application. Shenesa uye uomesa chero overpray iyo inonamira padenga padyo.
Bvunzo Yekutanga - Nguva dzose edza yako yekuchenesa mhinduro pane isingazivikanwe nzvimbo usati waishandisa kune iyo yese pamusoro.
Usarega Vanochenesa Vanyorove - Usatendere vachenesi kugara kana kunyudza pachigadzirwa.
Usashandise Zvinhu Zvinonyangadza - Usashandise zvinoshambidza zvinoshatisa izvo zvinogona kukwenya kana kudzikisira pamusoro. Shandisa chipanji chakapfava kana chakapfava kana jira. Usamboshandisa chinhu chinoshungurudza senge brashe kana pira yekutsvaira kuchenesa nzvimbo.
KUCHENESA CHROME-ZVAKAWANDA ZVIDZIDZO
Mamiriro emvura anosiyana pasirese. Makemikari uye zvicherwa mumvura nemumhepo zvinogona kusangana kuti zvive nemhedzisiro yakaipa pakupedzisa zvigadzirwa zvako. Pamusoro pezvo, nickel sirivheri inogoverana zvakafanana hunhu uye kutaridzika nesirivha yakaisvonaka, uye kusvibisa kuduku kwakajairika.
Nekuchengeta zvigadzirwa zve chrome, tinokurudzira kuti usuke zvisaririra zvesipo uye zvinyoronyoro uome nejira rakachena rakapfava mushure mekushandisa kwese. Usatendere zvinhu zvakaita semushonga wemazino, chekubvisa chipikiri kana chinokonzeresa chekuchenesa kugara pamusoro.
Kuchengeta uku kuchachengetedza kupera kwepamusoro kwechigadzirwa chako uye kudzivirira kuona mvura. Kumwe kushandiswa kwewaini yakachena, isinga tsvete inobatsira mukudzivirira kuwanda kwemvura uye kubatidza mwenje nejira nyoro kunogadzira kubwinya kukuru.
KUTARISIRA MAGIRIKI MABHUKU
Magirazi zvigadzirwa zvakagadzirwa negirazi uye sirivheri. Shandisa chete jira nyorova kuchenesa. Amoniya kana vhiniga-based cleaners inogona kukuvadza magirazi anorwisa nekukuvadza micheto uye kutsigirwa kwemirazi.
Paunenge uchichenesa, shandisa jira uye usambo pfapfaidza kumeso kwegirazi kana nzvimbo dzakatenderedza. Kuchengetedza kunofanirwa kutorwa nguva dzose kudzivirira kunzwika uye kutsigirwa kwegirazi kunyorova. Vanofanira kunyorova, woma pakarepo.
Usashandise hasha dzinosuka pane chero chikamu chegirazi.
Post nguva: Chivabvu-23-2021
Wenzhou Cavoli Utsanana Ware Co., Ltd.